इटहरी (सुनसरी), मङ्सिर ५ गते । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्ने मुख्य मागसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन चलाए पनि यस मागको प्रभाव स्थानीय स्तरमा सकारात्मक छैन ।
पूर्वी तराईका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक अगुवा मधेस केन्द्रित दलहरूको यस मागलाई असम्भव ठान्छन् । पूर्वी तराई मधेसका सर्वसाधारण खासगरी जनकपुर वा वीरगन्जलाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी मान्न तयार छैनन् । उनीहरू विराटनगरलाई आफ्नो राजधानी देख्न चाहन्छन् ।
२ नं. प्रदेशको राजधानी जनकपुर वा वीरगञ्जलाई बनाउने करिब निश्चित रहेको बुझेका मोरङ र सुनसरीका नागरिक अगुवा मधेसी दलहरूले चलाएको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरे पनि आफ्नो प्रदेशको राजधानी जनकपुर वा वीरगन्जलाई मान्ने कुरामा नाक खुम्चयाउँछन् । मधेस भूभागलाई मधेस प्रदेशमै राख्नुपर्छ भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आए पनि विवादमा रहेका जिल्लाका वासिन्दा दुई नं. प्रदेशमा जान चाहेको पाइँदैन ।
पाँच जिल्ला मधेस प्रदेशमा गाभिनुपर्छ भन्ने मधेसवादी दलले उठाइरहेको मागको प्रभाव स्थानीय जनस्तरमा देखिँदैन, हाल एक नं. प्रदेशमा रहेका सुनसरीका वासिन्दासमेत विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । बरु उनीहरू झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा सप्तरी, सिरहा र उदयपुर मिसाएर नयाँ प्रदेश बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । त्यसो हुन नसके विवादमा ल्याइएका तीन जिल्लालाई केन्द्र शासित प्रदेश वा विशेष प्रदेशको रूपमा राख्न सकिने तर दुई नं. प्रदेशमा मिलाउन नसकिने अडान उनीहरूको छ ।
मधेसवादी दलका नेताहरूमा दुइटा धारणा पाइएको छ । उहाँहरूले औपचारिक रूपमा कुरा गर्दा यी तीन जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा जसरी पनि मिलाउने कुरा गर्नुहुन्छ भने अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा मधेस प्रदेशमा जान गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ ।
मधेस प्रदेशमा किन नजाने भन्ने जिज्ञासामा उहाँहरूले त्यसको प्रमुख कारण प्रदेशको राजधानी कहाँ भन्ने कुरालाई लिनुहुन्छ । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर हुने लगभग पक्कापक्की नै भइसकेको छ तर झापा, मोरङ र सुनसरीका वासिन्दालार्ई जनकपुरभन्दा विराटनगर नै प्यारो छ । झापा, सुनसरी र मोरङका जनताको मात्र होइन, सिराहा, सप्तरीसम्मका जनतालाई जनकपुर होइन, विराटनगर आकर्षणको केन्द्र भएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सुनसरीका सह इन्चार्ज एवम् केन्द्रीय सदस्य एसएन मेहताले झापा, सुनसरी र मोरङलाई मधेस प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने माग राख्दै आफूहरूले आन्दोलन गरिरहे पनि जनकपुरलाई राजधानी बनाउने हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो ।
गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरि भन्नुहुन्छ, जनकपुरभन्दा धेरै कुरामा विराटनगर राम्रो छ, यताका जनता विराटनगर छाडेर जनकपुर जाँदैनन्, त्यही भएर जनताको मनस्थिति बुझ्दा झापा, सुनसरी र मोरङलाई दुई नं. प्रदेशमा मिलाउन गाह्रो छ । ’
झापा, सुनसरी र मोरङवासी विराटनगरलाई राजधानी बनाउनेमा भने एकमत देखिन्छन । मोरङ विराटनगरका सहप्राध्यापक डा. उद्धव पोखरेलले भन्नुहुन्छ, ‘व्यापार, व्यवसाय, शिक्षादीक्षा, उद्योगधन्दालगायतको हिसाबले मधेसको केन्द्रविन्दु विराटनगर भएको छ, त्यसको तुलनामा जनकपुर वा वीरगन्ज केही पनि होइन । बरु झापा, मोरङ, सुनसरीमा दुई नं. प्रदेशका सिराहा र सप्तरीलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाई विराटनगरलाई राजधानी बनाउन सकिन्छ तर जनकपुर वा वीरगन्जलाई राजधानी स्वीकार गरेर मधेस प्रदेशमा कदापि जान सकिँदैन । ’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको मामिलामा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटलगायतका २ नं. प्रदेशका जिल्ला अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै पछाडि छन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले नै भन्न थालेका छन्, जानकी मन्दिरको भेटीबाट मधेस प्रदेश चलाउन सकिँदैन । सिराहाको सारस्वरबाट झापाको विर्तामोड बसाइ सरेका विनोद साह अब सिराहा फर्केर जान्न चाहनु हुन्न । जानुप¥यो भने पनि पाहुनाको रूपमा जाने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँले दुई नं. प्रदेश सबभन्दा पिछडिएको र विकासमा पछाडि पारिएको प्रदेश रहेको दाबी गर्दै झापामा गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘मधेस प्रदेशलाई जानकी मन्दिरको भेटीको भरमा चलाउन सकिँदैन । ’ उहाँले दुई नं. प्रदेशमा यादवको बर्चस्व रहेको र अरु जातिको केही नचल्ने भएकाले आफूलाई दुई नं. प्रदेशमा जाने मन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौँको पत्रकारिता छाडेर आफ्नो गृहजिल्ला सुनसरीलाई नै कर्मक्षेत्र बनाउन पुग्नुभएका स्थानीय वर्णमाला दैनिकका सम्पादक शशी कोइराला भन्नहुन्छ, ‘झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा मिलाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, बरु दुई नं. प्रदेशका केही जिल्लालाई यताको प्रदेशमा मिलाउन सकिन्छ तर दुई नं. प्रदेशमा कुनै पनि हालतमा जान सकिँदैन’ ।
सुनसरीको दुहवीमा भेट हुनुभएका थारु कल्याणकारी सभा सुनसरी जिल्लाका पूर्वसचिव गवन चौधरीले आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । आफूहरूको पहिचान सुनिश्चित हुने गरी सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन भयो भने मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्ने नभए कुनै पनि प्रदेशलाई स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो ।
मोरङ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला इन्चार्ज एवम् केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले पूर्वका तीनै जिल्लालाई दुई नं. प्रदेशमा मिलाउन माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि आफूहरू विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । झापामा ३० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र मधेसी छन् भने ७० प्रतिशत पहाडिया छन् । विराटनगरमा ६० प्रतिशत मधेसीको बसोबास छ भने ४० प्रतिशत पहाडिया छन् । त्यस्तै सुनसरीमा ७० प्रतिशत मधेसी छन्, ३० प्रतिशत पहाडिया मूलका मानिसको बसोवास छ ।
जैविक विविधताको दृष�